१४ दिनमा तपाईको बढ्दो पेट घट्छ, गर्नुहोस् यी ९ तरिकाको व्यायाम ::पूरा पढ्नु होस । - Taja Report
Homeस्वास्थ्य/जिबनशैली१४ दिनमा तपाईको बढ्दो पेट घट्छ, गर्नुहोस् यी ९ तरिकाको व्यायाम ::पूरा पढ्नु होस ।
August 31, 2018 स्वास्थ्य/जिबनशैली Comments Off on १४ दिनमा तपाईको बढ्दो पेट घट्छ, गर्नुहोस् यी ९ तरिकाको व्यायाम ::पूरा पढ्नु होस ।
काठमाडौँ,३ भदौ । के तपाईको निरन्तर पेट बढ्दै गएको छ ? हो त्यसो हो भने सावधान हुनुहोस् जसको कारण तपाईलाई विभिन्न रोगहरु लाग्न सक्छ । त्यसैले अब १४ दिनसम्म लगातार यस्ता व्यायामहरु गर्दै जानुस् पेट बढ्ने समस्या बाट मुक्त हुनुहुनेछ । तपाईले यसको लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन् ।
३.साइड टु साइड
६.फिन्गर टु टोइज
यी १० लक्षण देखिएमा थाहा पाउनुहोस् क्यान्सर लाग्दैछ, छिट्टै डाक्टरकोमा गइहाल्नुहोस् !
> जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (389)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (372)
म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ (141)